ဒီည ဘနျဒီဘိချ ပှဲထှကျကစားမယျ…. – Premier League Special
ခံစဈမှာတော့ ဒဏျရာက ပွနျလာပွီးနောကျပိုငျး ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဘိုငျလီကို လူငယျနောကျခံလူ တှမျဇီဘီနဲ့ တှဲဖကျကစားဖို့ ရှိနပွေီး ညာနောကျခံလူနရောမှာ ဘဈဆာကာကို အနားပေးမယျ့အနအေထားကွောငျ့ ဘရနျဒနျဝီလီယံဈက အဲဒီနရောမှာ ဝငျကစားဖို့ရှိပါတယျ။
ဘယျနောကျခံလူနရောမှာ တဲလကျဈရှိနတောကွောငျ့ လုချရှောကို အနားပေးမယျ့အနအေထားပါပဲ။ ဒီရာသီ ပွိုငျပှဲစုံ အိမျကှငျးရလဒျတှေ ဆိုးရှားနတေဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ အခု ဝကျဖို့ဒျနဲ့ကစားမယျ့ FA ဖလား အိမျကှငျးပှဲစဉျမှာ နညျးပွဆိုးလျရှားက အဓိက ကစားသမားတခြို့ကို အနားပေးသှားဖို့ ရှိတာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ ရလဒျကောငျး ရယူပွီး နောကျတဈဆငျ့တကျလှမျးနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဗနျဒီဘိချကို ဝကျဖို့ဒျအသငျးနဲ့ ပှဲစဉျမှာ ပှဲထှကျကစားသမား နရောပေးသှားမယျ့ အကွောငျးကိုလညျး ဆိုးလျရှားက “ဗနျဒီဘိချ ပှဲထှကျကစားခှငျ့နဲ့ ပတျသတျပွီး ကြှနျတျော ရှမှေ့ာ အမြားကွီး ဖွခေဲ့ပွီးပါပွီ။ တခြို့ ကစားသမားတှဟော ပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့ အခြိနျ အနညျးငယျ လိုအပျလေ့ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အသငျးမှာ ဒီလို ကစားသမားတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ပွီးတော့ တခွားအသငျးတှမှောလညျး ဒီလို ကစားသမားတှေ ရှိပါတယျ။ တဈခါတလေ ကစားသမားတှေ ဟာ အသငျးသဈမှာ အသားကဖြို့ အခြိနျလိုအပျပါတယျ။
အခုလို အခြိနျမှာ သူ့ကစားခှငျ့မရသေးတာနဲ့ ပတျသကျလို့ စိုးရိမျနတေဲ့သူတှကေို တိတျတိတျနပေေးဖို့တားဆီးလို့ မရပါဘူး။ သူတို့က ဗနျဒီဘိချ အကောငျးဆုံး ဖွဈနတောကိုပဲ မွငျခငျြကွတာလေ။ ဒှနျနီက ဝကျဖို့ဒျအသငျးနဲ့ ပှဲစဉျ မှာ ကြိနျးသပေေါကျ ကစားသှားမှာပါ။ ကြှနျတျော သူနဲ့ စကားပွောပွီးပါပွီ။ သူက ကြှနျတျောတို့ကို အမြားကွီး အံ့အားသငျ့စခေဲ့တဲ့ ကစားသမား တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောကွား သှားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ အပွောငျးအရှကေ့ ယူနိုကျတကျကစားသမားဟောငျး ဗနျဒါးဆားကွောငျ့ အဂေကျြအသငျး ကနေ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ပွောငျးရှလေ့ာတဲ့ အသကျ ၂၃နှဈ အရှယျရှိ နယျသာလနျ လကျရှေးစငျ ကှငျးလယျလူ ဗနျဒီဘိချဟာ ဒီနှဈ ဘောလုံးရာသီမှာ အသငျးအတှကျ (၇၆၂) မိနဈသာ ပါဝငျကစားထားရသေးတဲ့ ကစားသမားလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီည ဘန်ဒီဘိခ် ပွဲထွက်ကစားမယ်….
ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ကစားမယ့် FA ဖလား တတိယအဆင့်ပွဲမှာ ကစားသမားတချို့ အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး ပွဲထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်နဲ့ ဝက်ဖို့ဒ်အသင်းတို့ဟာ ဒီနေ့ည (မြန်မာစံတော်ချိန် တနင်္ဂနွေ မနက် ၂း၃၀)မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပြီး ဆိုးလ်ရှားက ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဗန်ဒီဘိခ်ကို ပွဲထွက်လူစာရင်းမှာ အသုံးပြုမယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ဗန်ဒီဘိခ်ကို No 10 Role နေရာမှာ အသုံးပြုသွားဖို့ ရှိနေပြီး သူနဲ့အတူ ဂရင်းဝုဒ်၊ မာတာ၊ ဒန်နီယဲလ်ဂျိမ်းစ်တို့ကို တိုက်စစ်အတွဲအဖက်မှာ ထုတ်သုံးသွားမယ့်အနေအထားပါပဲ။ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နောက်ဆုံး (၉)ပွဲဆက်မှာ ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ နောက်ဆုံး (၁၉)ပွဲဆက် ကစားခဲ့ရတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားတို့ကိုတော့ ဒီပွဲမှာ အနားပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်က အငှားခေါ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ လင်ဂတ်ကလည်း ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့ ရှိနေသလို အသင်းနဲ့ အငှားစာချုပ်ကုန်ဆုံးတော့မယ့် တိုက်စစ်မှူး အီဂါလိုဟာ ပွဲထွက်ခွင့် မရရင်တောင် လူစားဝင်ကစားခွင့်ရပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းကို နှုတ်ဆက်ခွင့်ရမယ်လို့ ယူဆရမှာပါ။ ခံစစ်မှာတော့ ဒဏ်ရာက ပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်း ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဘိုင်လီကို လူငယ်နောက်ခံလူ တွမ်ဇီဘီနဲ့ တွဲဖက်ကစားဖို့ ရှိနေပြီး ညာနောက်ခံလူနေရာမှာ ဘစ်ဆာကာကို အနားပေးမယ့်အနေအထားကြောင့် ဘရန်ဒန်ဝီလီယံစ်က အဲဒီနေရာမှာ ဝင်ကစားဖို့ရှိပါတယ်။ ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာ တဲလက်စ်ရှိနေတာကြောင့် လုခ်ရှောကို အနားပေးမယ့်အနေအထားပါပဲ။ ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲစုံ အိမ်ကွင်းရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အခု ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ကစားမယ့် FA ဖလား အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာ နည်းပြဆိုးလ်ရှားက အဓိက ကစားသမားတချို့ကို အနားပေးသွားဖို့ ရှိတာကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ ရလဒ်ကောင်း ရယူပြီး နောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဗန်ဒီဘိခ်ကို ဝက်ဖို့ဒ်အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ပွဲထွက်ကစားသမား နေရာပေးသွားမယ့် အကြောင်းကိုလည်း ဆိုးလ်ရှားက “ဗန်ဒီဘိခ် ပွဲထွက်ကစားခွင့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် ရှေ့မှာ အများကြီး ဖြေခဲ့ပြီးပါပြီ။ တချို့ ကစားသမားတွေဟာ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ အချိန် အနည်းငယ် လိုအပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းမှာ ဒီလို ကစားသမားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ တခြားအသင်းတွေမှာလည်း ဒီလို ကစားသမားတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကစားသမားတွေ ဟာ အသင်းသစ်မှာ အသားကျဖို့ အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ အခုလို အချိန်မှာ သူ့ကစားခွင့်မရသေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေကို တိတ်တိတ်နေပေးဖို့တားဆီးလို့ မရပါဘူး။ သူတို့က ဗန်ဒီဘိခ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေတာကိုပဲ မြင်ချင်ကြတာလေ။ ဒွန်နီက ဝက်ဖို့ဒ်အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ် မှာ ကျိန်းသေပေါက် ကစားသွားမှာပါ။ ကျွန်တော် သူနဲ့ စကားပြောပြီးပါပြီ။ သူက ကျွန်တော်တို့ကို အများကြီး အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြား သွားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့က ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ဗန်ဒါးဆားကြောင့် အေဂျက်အသင်း ကနေ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ အသက် ၂၃နှစ် အရွယ်ရှိ နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ဗန်ဒီဘိခ်ဟာ ဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ အသင်းအတွက် (၇၆၂) မိနစ်သာ ပါဝင်ကစားထားရသေးတဲ့ ကစားသမားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။